Home AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Dominic Solanke Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha "XGoalanke".
Dominmụaka Dominic Solanke Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge. Nyocha a gụnyere ndụ nwata ya, ndabere ezinụlọ ya, akụkọ ndụ tupu aha ya, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na ndụ onwe ya wdg.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọchichọ ọ na-achọ ịbụ onye egwuregwu bọọlụ mbụ maka Premier League. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Dominic Solanke nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Dominic Solanke Akụkọ nke Childhoodmụaka - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Dominic Ayodele Solanke-Mitchell mụrụ na 14th ụbọchị Septemba 1997 na nne na nna ya, nna Nigeria na nne Britain na Reading, England. N’agbanyeghi na amuru na Britain, Solanke nwere mgbọrọgwụ nke Naijiria site na nna ya. O sitere na ndi Naijiria ndi Naijiria ndi ndi bi na South Western nke mba.
Ahụmahụ Ụmụaka Mgbu:
Dominic Solanke n'oge ọ bụ nwata hụrụ mmekọrịta dị n'etiti ndị mụrụ ya. Nke a bụ oge ihe malitere ịda. N'oge na-adịghị anya, nna Solanke ji obi ike pụọ n'ụlọ ezinụlọ ya. Nke a hapụrụ ogbenye Solanke na nne ya (nke dị n'okpuru ebe a) na-anwụ naanị ha, na-enwe obere ego.
O doro anya na nwatakịrị ọ bụla dị ka Solanke nke bie ndụ site na nkwụsị nke nne na nna ga-ama nke ọma nsogbu mgbu nke obi nwere ike ịkpata. Solanke bụ otu n'ime ndị ọzọ na-agba ọsọ ụkwụ nke nwere ụlọ gbawara agbawa na mmetụta ọ ka na-enwe taa.
Ka oge na-aga, mmerụ mmetụta uche gwọrọ. Mama Dominic Solanke gara n'ihu ma lụọ di na nna ya bụ onye weghachiri obi ya na nke ụmụ ya.
N'ịbụ onye ya na ụmụnne ya na nwanne ya nwoke toro, Solanke gara Brighton Hill Community School. Mgbe ọ nọ n'ụlọ akwụkwọ, ọ na-elekwasị anya na bọlbụ nke ghọrọ isi iyi nke nkasi obi pụọ na nsogbu ya. Nna nna Solanke nke agbaghara mgbaghara mechara laghachi na ndụ nwa ya. Ọ duziri ya n'ịhọrọ ụzọ ọrụ ya nke taa kwụrụ ụgwọ ya.
Dominic Solanke Akụkọ nwata - Ọrụ mmalite:
N'ịbụ onye efu na-ejedebe mgbe football na-agba ụkwụ ya mgbe niile, agụụ Solanke na-eto eto maka bọọlụ hụrụ ya ka ọ debanye aha ya na ịga nke ọma na-agabiga ule na agụmakwụkwọ Chelsea n'afọ 2004. Otu n'ime ncheta kachasị mma ya n'oge ọ na-abanye bụ inwe otu-na- onye nwere akụkọ banyere Chelsea- John Terry.
Ọ bụ oge na-enye obi ụtọ maka nwa na-eto eto bụ onye hụrụ onwe ya na klọb nke onye nwe ya rejuvenated Roman Abramovich. Solanke bụ n'etiti ndị ọzọ na-enwu gbaa agụmakwụkwọ egwuregwu ọ bụ; Tammy Abraham na Igwe Igwe Ntughari Ruben nke ahụ nwetara ohere iji nwee oge pụrụ iche na Roman Abramovich.
Dominic Solanke Biography - tozọ A Maara Aha:
Solanke nọgidere na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Chelsea na-eto eto na-eto eto dị iche iche ma na-emeri nnukwu nsọpụrụ nke otu n'ime ha bụ onye ọkpụkpọ agụmakwụkwọ a ma ama nke onyinye afọ ahụ.
Imeri onyinye a n’inweta nkwalite ka gi na ndi otu ndi okenye Chelsea na-egwuri egwu. N'ịchọ ịghọ onye ọkpụkpọ klọb maka Chelsea, Solanke gosipụtara nnukwu ọrụ siri ike na ntinye aka ya na mba ụwa.
Na May 2014, Solanke so n'òtù ndị n'okpuru-17 nke meriri 2014 UEFA European Under-17 Championship ya na ya ịghọ onye nchịkọta egwuregwu-nkwonkwo.
Na Jenụwarị 2015, akpọrọ Solanke England Player's Youth Player of the Year maka 2014. Solanke n'oge a ka ọ na-achọ ịghọ onye egwu bọọlụ mbụ nke Chelsea chere na naanị ihe fọdụrụ bụ inweta ahụmịhe karịa na-egwu na mpaghara ọzọ.
Solanke kwetara ka e ziga ya na Vitesse. Mgbe ọ nọ na Netherlands, ihe gara nke ọma maka onye na-eti ihe ka o meriri ihe mgbaru ọsọ dị mkpa maka ụlọ ọrụ ọkachamara kacha ochie na Eredivisie.
Dominic Solanke Bio - Mgbalị:
N'ịlaghachi site na mgbazinye ego ya, Solanke malitere ọchịchọ nke ịlụ ọgụ maka ebe n'ọnọdụ mbụ. O wutere ya na ọ hụrụ onwe ya ka ọ na-enweghi oge egwuregwu ma jigide ya dị ka onye ọkpụkpọ nke atọ nke Chelsea n'azụ Diego Costa na Michy Batshuayi.
N'ihi obi nkoropụ na mgbe njedebe nke nkwekọrịta ya, Solanke mere njem siri ike gaa Liverpool. Nfefe ya bụ ihe nkiri dị egwu nke hụrụ ya ka ọ na-achụpụ onwe ya n'ọzụzụ. N'ime oge a, asịrị nke Solanke chọrọ ego ndị ọzọ karịa ịbụ onye egwu izizi pụtara na mgbasa ozi. Solanke mechara kwupụta asịrị ndị a nke mere ka Daily Telegraph mee mgbanwe na mbipụta ha.
Na otu egwuregwu na egwuregwu dịka Mohammed Salah na Sadio Mané na Roberto Firmino, Solanke ka nwere oge siri ike na-alụ ọgụ maka otu ọrụ dị mkpa. Nke a kpalitere nkụda mmụọ ọzọ na ya na Klopp.
N'ịga n'ihu, Solanke bịanyere aka na AFC Bournemouth nke ọzọ na Premier League na 4 Jenụwarị 2019. N'oge a, England kpakpando nwere olile anya na otu ndị otu egwuregwu na-eme egwuregwu ga-eme ka nrọ ya bụrụ onye egwuregwu bọọlụ nke mbụ ga-emezu.
Dominic Solanke mmekọrịta mmekọrịta:
Ọnye na-bụ Dominic Solanke's Girlfriend?
Mmekọrịta ndị zoro ezo nke Dominic Solanke bụ otu nke na-agbanahụ nyocha nke ọha mmadụ naanị n'ihi na ndụ ịhụnanya ya dị nnọọ iche na ikekwe enweghị ihe nkiri na enyi nwanyị ọ na-amaghị.
Eziokwu bụ, Solanke dịka n'oge ederede kpebiri na ọ gaghị eme ka ọha na eze mara ihe ọ bụla gbasara ndụ ya. Eziokwu a na-eme ka o siere ndị edemede ike ịmata ihe banyere ndụ ịhụnanya ya na akụkọ ihe mere eme ya.
Dominic Solanke Ndụ Nke Onwe:
Mata ndụ Dominic Solanke nke onwe ya pụọ ​​na bọlbụ ga-enyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma. Ọ bụ onye na-ebi ndu nkịtị ma chọọ iyi uwe dị mfe ma mara mma.
Solanke nwere ụzọ dị mkpa maka ndụ nke na-eme ka o doo anya na ọ dịghị ihe ọ bụla fọdụrụnụ. Nke a na-akọwa ọtụtụ ihe gbasara ọganihu ọrụ ntorobịa ya (mmeri agụmakwụkwọ nke afọ na U20 World cup). Solanke kwenyere na ndị a n'etiti ndị ọzọ bụ nzere ya maka oge ịgba egwu
Dominic Solanke Web Ndụ:
Dom bụ ndị ọgaranya bara ọgaranya na-enweghị nchegbu ego. A na - ejikọkarị akụ na ụba ya na ndụ nke iti mkpu nke a na - ahụkarị mgbe ọ na - aga ezumike. Omume a na-agbakwunye ụfọdụ isi ihe na ọkwa ya.
N'elu ụlọ ya, Solanke bi ndụ dị mma ma chọọ ịgbanye ego ya ịzụta mmanya dị oké ọnụ. Ọ bara uru na £ 10 (dị ka n'oge ederede) na ndụ dị ka onye bara ọgaranya.
Dominic Solanke Eziokwu Eziokwu:
Dominic Solanke kwuru otu oge;… “Emela ekwe ka mmadu gwa gi na nro gi riri nne. Ọ bụrụ na ịchọrọ ihe, gaa nweta ya. ”
Nke a mere mgbe o kesịrị foto n'onwe ya na akụkọ akụkọ Chelsea John Terry mgbe ọ bụ 8 afọ, oge ọ sonyeere ụlọ akwụkwọ sayensị Chelsea.
Echiche banyere onye ikwu ya na Naijiria:
N'ịchọta na ha na-eburu aha nna ahụ, ọtụtụ ndị na-eche Solanke metụtara Tomiwa Solanke bụ onye ọzọ na England na mgbọrọgwụ nke Naijiria. Mgbe ha nyochara nlezianya anya, a chọpụtara na ha enweghị njikọ ọbara.
Nyochaa: Daalụ maka ị gụ akwụkwọ Dominic Solanke Ụmụaka Akụkọ nke a na-akọchaghị eziokwu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Daalụ maka akụkọ a na ịkọwa eziokwu ị maara banyere ya. Wish Dominic kachasị mma maka ọdịnihu. Cheers